Nezvedu - Anhui Meimao Medical Equipment Co., Ltd.
Anhui Meimao Medical Equipment Co., Ltd.iri muindasitiri paki yeRenhe Town, Tianchang Guta. Iyo yakavanzika yepamusorosoro bhizinesi rinotungamira mukugadzirwa kwemarara anoraswa echigadzirwa, masiki ekuvhiya ekurapa uye masiki ekudzivirira ehurumende. Iyo kambani ine 100000 nhanho aseptic semusangano we2000m2, 12 yepamusoro yakazara-otomatiki mask yekugadzira mitsara, yehupenyu uye yepanyama-makemikari mashandiro erabhoritari akavakwa zvakanyatsoenderana nematanho epamusoro, yakakwana yekuyedza uye yekuongorora zviridzwa, yakakwana tekinoroji uye manejimendi timu, ine kugadzirwa kwemazuva ese kwemamirioni 1.5. Chigadzirwa chakapasa iro boka bvunzo uye yenyika muyero bvunzo, uye zvakateerana kuwana Chinese kirasi II yekurapa mudziyo kunyoresa chitupa, gadzira rezinesi, US FDA kunyoreswa, EU CE uye chimwe chitupa, uye kubudirira vakapinda kaviri "chena runyorwa".
Anhui Meimao Medical Equipment Co LTD. inogara inonamatira kune tenet ye "mhando yekutanga, manejimendi kutanga, tekinoroji inotungamira vanhu, kuhwina-kuhwina kubatana", inoomerera kune bhizinesi uzivi hwe "Meimao mask, kuchengetedza hutano hwevanhu", inovavarira kupa zvigadzirwa zvinogutsa uye masevhisi kune vazhinji Yevashandisi, uye inogamuchira neushamwari shamwari kubva kumatunhu ese epamba kumba nekune dzimwe nyika kuti vashanyire nekutungamira, uye pamwe chete kuchengetedza hutano hwevanhu uye hupenyu hwakachengeteka!
Isu tinodada nekugona kupa pazasi-mhando masevhisi kubatsira vatengi kuzadzisa zvavanoda.
Mhando dzakasiyana dzeMasiki- Tinopa masiki anodzivirirwa anodzivirirwa, 3M KN90 / KN95 masks, KN95 Masiki (ane FFP1 / FFP2 / FFP3 mhando), Masiki ekurapa anoraswa, Anoraswa Maski ekuvhiya, Vana / Masiki evana.
Yakakura Kugona & Kukurumidza Dhirivhari- Yekurasa masiki, kugona kwedu kuri 1 miriyoni + pazuva, kune KN95 masiki, inogona kupa zviuru mazana mashanu + pazuva. Kutanga kutumira kunogona kutanga mukati memazuva matatu.
Chaizvoizvo Kudzora kwemhando - Chekutanga, masiki edu anosangana neEurope Standard EN149: 2001 + A1: 2009 ine FFP1 NR / FFP2 NR / FFP3 NR mamaki, American standard NlOSH N95, FDA, Australia standard AS / NZS1716: 2003, Chinese GB / YY standard uye vane zvitupa zvinoenderana. Kechipiri, isu takanyatso sarudza zvinhu, kunyanya kune jira rekupfira uye jira risiri rakarukwa, kuona kuti chigadzirwa chinoshandiswa nezvinhu zvinokodzera. Chechitatu, isu tichaitisa kuongororwa isati yatumirwa, uye toburitsa mushumo wekuongorora
Yekutakura rubatsiro-Sezvo paine huwandu hukuru kwazvo hwemasiki anotumirwa zuva rega rega, maererano nekugadziriswa, isu takabatana pamwe nemakambani mazhinji makuru ekugadzirisa zvinhu. Kune ndege dzinojairika vhiki rega rega uye dzinobhururuka kuenda kunhandare dzenyika dzakasiyana siyana, kuve nechokwadi chekuendesa zvigadzirwa kwauri zvakachengeteka uye nekukurumidza.
Kunze uye kutumira kunze tsika kubvumidzwa- Nekuda kwekirasi yakasarudzika yemasikisi, kubvumidzwa kwetsika kupinza uye kutumira kunze kungave chinhu chinonetsa. Asi kwatiri, chiitiko chinogona kugadziriswa nekukurumidza. Sezvo chigadzirwa chedu chine zvitupa nemagwaro zvakazara, pamwe nemakambani ane hunyanzvi uye zvikwata zvekubvisa kutsika, izvo zvinogona kubatsira kuwana mvumo kubva kutsika nekukurumidza.
Usingaenzaniswi nevatengi sevhisi- Isu tinozvirumbidza zvikuru mukupa iyo yepamusoro chikamu chebasa uye rutsigiro kune vedu vanokoshesa vatengi pasirese. Ndiro basa redu kupa nekukurumidza uye pachedu mhinduro kumibvunzo yako kana makomendi. Kana paine chero chinhu chatinogona kuita kuti tikubatsire iwe, masikati kana husiku, zvinofadza isu kuti tibatsire uye tigadzirise sezvinobvira munguva inokurumidza kutendeuka nguva.